Podcast 2x12 an'ny Actualidad iPad: ny iPhone 7 miaraka amin'i Stylus, ilay Apple Watch vaovao ary tsaho maro hafa | Vaovao IPhone
Raha tsy misy ny tena vaovao dia tsy mijanona ny famoahana tsaho sy ny tsaho maro kokoa ny bilaogy. Nasongadin'ity farany fa ny iPhone 7 sy 7 Plus ho avy dia hifanaraka amin'ny Appel Pencil na farafaharatsiny fitaovana mitovy amin'izany. Ho fiverenan'ny stylus amin'ny fiainantsika ve izany? Ary koa ny Apple Watch manaraka izay toa tonga amin'ny tapaky ny taona manaraka. Mendrika ny fiandrasana ve sa tsara kokoa ny mankafy ny Apple Watch izao? Manarona an'izany rehetra izany sy ny maro hafa amin'ity podcast ity izahay. Halahelo azy ve ianao?
Henoy »2 × 12: iPhone 7 miaraka amin'i Stylus sy Apple Watch 2 ″ ao amin'ny Spreaker.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Podcast 2 × 12 an'ny Actualidad iPad: ny iPhone 7 miaraka amin'i Stylus, ilay Apple Watch vaovao ary tsaho maro hafa
Ny doka krismasy vaovaon'i Apple dia mahatsiaro indray andro any amin'ny Noely